Murashaxa WADDANI Oo Ka Qeyb-galay Aaska Marxuum Cabdiraxmaan Talyaanle | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Murashaxa WADDANI Oo Ka Qeyb-galay Aaska Marxuum Cabdiraxmaan Talyaanle
Hargeysa(SDWO):Murashaxa Madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Dr.Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa maanta ka qeyb-galay aas qaran oo magaalada Hargeysa looggu sameeyey Alle ha u naxariistee Marxuum/Xildhibbaan Cabdiraxmaan Talyaanle oo ka mid ahaa mudaneyaasha Golaha Wakiilada Somaliland oo todobaadkan ku geeriyooday dalka Hindiya.
Murashaxa Madaxweynaha WADDANI, ayaa sida oo kale waxa aaskaas kala qeyb-galay Murashaxa Madaxweyne ku xigeenka Xisbigaasi, Guddoomiyaha Ku meel-gaadhka ah ee Xisbigaasi, Hoggaamiyaha Xisbiga WADDANI.
Qaar ka mid hoggaanada, guddiyada fulinta, garabka dhallinyarta iyo taageerayaal tiro badan oo ka tirsan Xisbiga WADDANI.
Murashax Cirro iyo Madaxda kale ee Xisbiga WADDANI, ayaa dhammaantood ba u duceeyey Marxuumka, waxaana ay Alle uga baryeen in uu godka u nuuriyo sida oo kale na uu Eeb ka waraabiyo naxaristiisii jannatul Fardowsa. Ehelkii, qaraabaddii iyo asxaabtii uu ka baxayna samir iyo iimaan ka siiyoo.
Alle ha u naxariistee Marxuum Xildhibbaan Cabdiraxmaan Talyaanle, ayaa sida oo kale ka mid ah saraakiisha ugu sar-sareysa Xisbiga WADDANI isaga oo ka soo jeeday deegaanada bariga ee gobalka Sool.